Archive du 20180324
Fanadiovana vola maloto Miha mahazo vahana eto Madagasikara
96 miliara Ariary ny famotsiam-bola na fanadiovana vola maloto hita tamin’ny taona 2016. Niakatra ho 223 miliara Ariary tamin’ny taona 2017, araka ny tarehimariky ny sampandraharaha miady amin’ny famotsiam-bola (SAMIFIN).
Sandan’ny fanokafana ny Tiko -AAA Fihemoran-dRavalo tsy ho kandida…
Tsy misy fanazavana ara-teknika mazava fa dia nakatona ara-bakiteny ny orinasa Tiko-AAA, ka voatery naato ara-teknika ny mpiasa 702. Hatreto aloha dia tsy misy ny resaka marimaritra iraisana mba hitsinjovana ireo vahoaka an’arivony miasa ao amin’ity orinasa ity.
Hery Rajaonarimampianina Hanao tohatra fiakarana ny tambanivohitra
Mandeha ny propagandy mivantana na an-kolaka ataon’ny HVM mba hahafahan’izy ireo mifikitra hatrany amin’ny fahefana. Ny eny ambanivohitra no tena hanaovana azy io satria satria hatry ny ela no efa tena leo sy tofoka ity fanjakana ity aloha ny vahoaka amin’ny faritra somary ambanivohitra.
Fifidianana filoham-pirenena Hijabaka ihany koa i Saraha Rabeharisoa
Tapaka nandritra ny famaranana ny kongresy voalohan’ny antoko P.L.D (Paika sy Lamina ho an`ny Daholobe) fa hanolotra an-dRamatoa Saraha Rabeharisoa ho kandida filoham-pirenena. Hametraka fanamby goavana hametrahana indray ny Liberal Democrate ho tombontsoan`ny Malagasy ny PLD.
Andry Rajoelina “Tsy ekena ny fanaovana bontolo amin’ny fifidianana”
Miditra an-tsehatra sy manao ny serasera momba ny tsy fankasitrahana ny volavolan-dalàm-pifidianana i Andry Rajoelina. Tsikaritra ho mikoropaka tanteraka satria mety anisan’ny olona ho lasibatra ihany koa, raha toa ka lany tsy nasiam-panitsiana io volavolan-dalàna io.
Voninahitsy Jean Eugène Nihaodihaody teny Tsimbazaza
Taorian’ny fipoirany tampoka ny 20 desambra 2017 izay nilazany fa mpanavakavaka ka tsy mendrika ny ho filoha intsony ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, dia nangingina indray ny filohan’ny antoko politika RPSD vaovao, Voninahitsy Jean Eugene.
FEDEP Hanatanteraka DIABEN’ny Fampihavanam-pirenena
Ilaina ary tsy maintsy tanterahina eto amin’ny firenena mialoha ny fifidianana rehetra ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena tena izy sy ny fametrahana ny fanarenana ifotonyizay miafara amn’ny lalàm-panorenana vaovao hitondrana sy hanorenana ny firenena,
Mitombo an'isa indray ireo tsy an'asa Satria dia nikatona tanteraka ilay orinasa Hihamafy mazava ho azy ny fahantrana Tompon'andraikitra amin'izany rafanjakana.
Mpikamban’ny Governemanta Maro no mety higadra atsy ho atsy
Manomboka mifoha ny dosie lehibe momba ny kolikoly isan-karazany eto amin’ny firenena. Nidoboka am-ponja ny minisitra teo aloha Jean Razafindravonona voarohirohy tamin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy.
Kaontenera mihitsoka ao Toamasina Handoavana 80 000 ariary isan’andro
Zaza tsy ampy taona mividy sigara Tsy azo atao, voararan’ny lalàna
Tsy azo atao ary voararan’ny lalàna tanteraka ny maniraka zaza tsy ampy taona mividy sigara eny anivon’ireo toeram-pivarotana enta-madinika eto amintsika. Zary lasa adino tanteraka anefa izany ankehitriny, antony mampahazo vahana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny gaboraraka misy eto amin’ny firenena.
Hanao fety aloha ny depiote Nahemotra herinandro indray ny fivoriana
Nanomboka omaly zoma 23 martsa ny fivoriana tsy ara-potoana andiany fahatelo ho an’ny parlemanta raha araka ny fiantsoana nataon’ny filankevitry ny minisitra ny alakamisy teo mba hahafahana mandinika ireo volavolan-dalàna fehizoro telo momba ny fifidianana ary misy volavolan-dalàna hafa ihany koa moa.
Nodimandry omaly ilay mpanakanto ara-pilazantsara vao erotrerony Barry’s Andrianarivelo. Efa nihira tao amin’ny tarika Les Adélines izy taloha,
Ahmad - Filohan’ny CAF Hanana birao fiasana eto Madagasikara
Hanana birao fiasana eto Madagasikara atsy ho atsy ny filohan’ny CAF am-perinasa, Atoa Ahmad, izay efa tonga eto an-toerana herinandro teo ho eo izao.
Lalao rugby faha-35 taonan’ny 3FAI Nahemotra amin’ny fotoana manaraka
Nanambara tamin’ny fampitam-baovao fohy nataony tetsy Tsaralalàna misy ny foiben’ny ekipan’ny 3FAI Ambalavao Isotsy ny alakamisy 22 martsa teo,
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Rabemananjara Alban na i Bàbà Fanaovana ny tsara no mahomby eo amin’ny fanatanjahantena
Iray amin’ireo kintan’ny Fanatanjahantena ao an-tanànan’i Mahajanga indray no tafaresaka tamin’ny gazety Tia Tanindrazana tamin’ny fotoana nandalovana tany an-toerana farany (18 martsa 2018) dia Rabemananjara Alban mpilalao baolina kitra kalaza tamin’ny fotoanandrony ka hotaterina aminao eto ny mikasika azy, araka ny fanazavana nomeny tamin’izany.
Ho an’ny vahoaka tokoa !
Fandrangitana ve sa porofon’ny tsy fijeren’ny mpitondra ny fiainam-bahoaka eny ifotony ity famerimberenana ny teny hoe ho an’ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny hoe ho an’ny vahoaka isak’izay mandray fitenenana ity na dia efa miharihary izao aza mitantana ny malagasy ho any amin’ny faharendrehana ny fanapahan-kevitry ny mpitondra ankehitriny ?
ECCOVA Niatrika fiofanana ireo mpampianatra manerana ny Nosy
Nifarana tamim-pomba ofisialy omaly zoma 23 martsa tetsy amin’ny ECCOVA Analakely ny fiofanana natrehin’ireo mpampianatra manerana ny Nosy ho fanatevenana ny faripahaizan’izy ireo.
Gidragidran’ny oniversiten’i Toamasina Mpianatra 5 indray voaroaka
Niakatra filankevi-pifehezana na CODIS teo anivon’ny oniversiten’i Toamasina ny mpianatra 5 lahy omaly.
Fanorenan-trano etsy sy eroa Misy Malagasy tena manam-bola
Miaina tanteraka anaty fahantrana ny Malagasy. Maro no mitaraina fa sahirana amin’ny fivelomana. Mampametra-panontaniana ihany anefa ny fananganan-trano maro misy, indrindra eto Antananarivo.
Tsenan’ny henan’omby Tsy mahalany 30 kg isan’andro intsony ny mpivarotra iray
Tena miaina ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan’ny tokantrano malagasy ankehitriny.
Filaharana lavareny eny amin’ny banky Tena tsy ampy ny mpiasa
Maro ny olona no velon-taraina rehefa mankeny amin’ireny banky samihafa ireny.
Vondron’ny mpandraharaha Mangina manoloana ny antsojay mahazo ny Tiko -AAA
Tsaroana tsara ilay Kiririokan’ny fahasosorana nataon’ireo mpandraharaha Malagasy, ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana maro samihafa tamin`ny alakamisy 15 martsa lasa teo.